DAAWO:Sucuudiga oo Cilaaqaadka u Gooyay Dalka Iiraan iyo Xaalada oo Cirka Isku Shareertay. |
DAAWO:Sucuudiga oo Cilaaqaadka u Gooyay Dalka Iiraan iyo Xaalada oo Cirka Isku Shareertay.
Riyad(GNN) -Dawladda Sucuudiga ayaa xidhiidhka u jartay dalka Iiraan. Xidhiidhka u dhaxeeya labadan dal ee uu xafiiltanka ka dhaxeeyay ayaa in mudda ahba sii xumaanayay. Hasayeeshee arrinta ayaa cirka isku shareertay kaddib markii Sabtidii la dilay Sheekh Nimr al-Nimr oo ah wadaad caan ah oo Shiica ah.
Wadaadka la dilay ayaa hoggaaminayay mudaharaado ka dhacay Sucuudiga, waxaana dilkiisa ka dhashay in Dad cadhaysan ay weerrareen safaaradda Sucuudiga ee Tehran iyo qunsuliyadda ku taal magaalada Mashad. Wuxuu Sucuudiga in ka yar maalin gooyay xidhiidhkiisa Iiraan.
Madaxweynaha Iiraan, Xasan Ruuxaani, ayaa waxa uu dhaleeceeyay rabshadahaasi dadkiisu kula kacay safaaraddaha Sucuudiga, balse waxa uu sidoo kale cambaareeyay dilka wadaadkaasi oo uu ku tilmaamay mid ka baxsan bini’aadamnimada. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan, Aayatullaah Cali Khamani, ayaa saadaaliyay inuu dhici doono aargoosi weyn.
Dawladda Sucuudiga ayaa amartay in diblamaasiyiinta Iiraan degdeg uga baxaan dalka Sucuudiga. Go’aanka degdega ah ee Sucuudi Carabiya ee lagu eryayo diblumaasiyiinta Iiraan ayaa gaadhsiinaya xidhiidhka sii xumaanayay ee labada dal heerkii ugu hooseeyay muddo sanada ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Sucuudiga Adel al-Jubeir, ayaa ku dhawaaqay inaanay Iiraan quudhsan karrin ammaanka dalka Sucuudiga. Waxa uu ku dhawaaqay amarka ah in 48 saac ay diblamaasiyiinta Iiraan dalka Sucuudiga kaga baxaan,taas bedelkeedana diblamaasiyiinta iyo shaqaalaha Sucuudiga ee Iiraan ku soo laabanayaan dalkooda Sucuudiga.
Xidhiidhka diblumaasiyadeed ee u dhaxeeyay labadan quwadeed ee Sunniga iyo Shiicada ah oo go’a ayaa waxaa laga dareemi doonaa guud ahaa Bariga Dhexe, halkaasi oo ay kala taageeraan dhinacyo iska soo horjeeda oo dagaalamaya. Labada dal ayaa ku xafiiltamaya hoggaaminta gobolka bariga dhexe.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa ku dhamaaday raja ah in wadahadalada nabadda ee dalka Yemen ay bilowdaan, halka wadahadala Suuriyana ay xigi doonaan bishan, balse khilaafkan cusub ayaa u muuqda mid arrintaasi murgin doona.
Maraykanka ayaa ku baaqay in xiisadda u dhexaysa Sucuudiga iyo Iiraan la dejiyo. Waxa uu soo jeediyay in wada hadal lagu dhammeeyo arrimaha lagu kala aragti duwan yahay.